Tamin'ny taona fankatoavan'ny Gas BBQ amin'ny Side burner Grill - China Shijiazhuang HGW Trading
Tamin'ny taona fankatoavan'ny Gas BBQ amin'ny Side burner Grill
Fire Plus 4 + 1 BBQ Gas Grill Stainless Steel Burners mitono hena amin'ny lafiny burner
Ny 5-burner Gas Grill maro dia ahitana ny endri-javatra manokana. Cook ho vondrona lehibe amin'ny mihoatra ny 600 ny fandrahoan-tsakafo ny taona ao amin'ny faritra. Azonao atao mihitsy aza Grill hatramin'ny 28 hamburgers amin'ny fotoana ity Better Homes and Gardens entona Grill. Ny fanaraha-maso ny tontonana Stainless vy miaro manohitra harafesiny. Izany entona Grill amin'ny lafiny burner koa dia mamela anao sear ny toerana tena sakafo alohan'ny grilling. Endri-javatra tsy manam-paharoa io dia manampy hahazoana antoka fa ny steaks ny hena sy ny hafa dia be ranony sy ny fitiavana. Electronic ignition amin'ny hanoto ny bokotra dia mahatonga azy faran'izay mora ny afo ny Tsara Kokoa ity Homes and Gardens entona Grill.
Total faritra ny Grill 634.5sq.in.cooking ambonin'ny / insulation harato: 175.5sq.in. Cooking faritra: 459 sq.in
Stainless vy mahandro tehina, mainty malamalama enameled insulation harato
Main vidy avy amin'ny ignition, 4PCS Stainless vy mahitsy sodina burner 4 * 12000BTU
QCC: tokana burner: L = 25 "
Sarony ambony: tontonana fanaraha-maso; bedplate rafitra; Stainless vy anoloan'ny vilia
Stainless vy lafiny burner1 * 12000BTU
Storable toetsika amin'ny 4PCS tongotra kodia
Stainless vy mari-pana
Stainless vy sarony tahony & lafiny famohana
Tafavory vokatra Dimensions: 138 (L) * 58 (D) * 116 (H) (CM)
Item #: GSF2818
Mitady tsara Gas Grill Manufacturer & mpamatsy? Isika manana fantina lehibe amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny BBQ Gas Grill no azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Gas Grill tamin'ny 5 Burners. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Product Categories: Outdoor Product> BBQ Grill
Previous: Fitaovana ivelan'ny trano Cooking Round Table Top mitono hena Grill
Next: Arina Smokeless Grill Round Design Red loko
VAOVAO 3 burner Gas mitono hena BBQ Outdoor Garden Pa ...